Global Voices teny Malagasy » Miblaogy nofinofy : Fahasalamàna ara-tsaina sy vondrompiarahamonina salama · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Marsa 2020 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika avylavitra
Sokajy: Mediam-bahoaka, Mibilaogy nofinofy, Rising Voices
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktôbra 2009)
Any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, ny fanafody no mamaritra ny fahasalamana ara-tsaina. Tsy mivadika ho rarintsaina ny alahelo raha tsy izy efa ‘tsaboina’ aminà fanafody fitsaboana rarintsaina (antidepressants) , ary ny ahiahy dia tsy afa-misaraka amin'ny fiainana; mandra-pisian'ny hoe misy pilina asaina hanina noho ny fikorontanana ateraky ny ahiahy sosialy,  ary izany mihitsy, izay “ny aretin-tsaina mateti-pitranga indrindra ao Amerika, mahavoa olondehibe eo amin'ny 40 tapitrisa eo”, araka ny tatitra vao haingana navoakan'ny gazetiboky New York Times. 
Eto Câmpulung Moldovenesc , tanàna kely iray ao avaratra-atsinanan'i Romania, manamorona ny Renirano Moldova , misy andianà mpikatroka mandrisika fanahy te-hifantoka amin'ny fahasalamany ara-tsaina fa tsy ny aretin-tsaina. Mandresy lahatra izy ireo mba hisian'ny fomba fijery iray mitodika mankamin'ny vondrompiarahamonina izay mampiaty ireo mpampiasa ny tolotra fahasalamàna ara-tsaina ho ao anatin'ny fiarahamonina, fa tsy ilay fanavankavahana sy fitsaratsarampoana mahazatra. “Meteza ho liana sy mifankahalàla amin'ny mpiray vodirindrina aminao,” hoy ny ambaran'ny pejy fandraisana  eo amin'ny tranonkalan-dry zareo, “aza odiana tsy hita izy, aza ampitahorina, ampio.”
Ny fampahafantarana ny fahasalamàna ara-tsaina  – ary tsy latsa-danja amin'izany ny fahasalamana ara-tsaina mifamatotra amin'ny fiarahamonina  – dia vao eo am-panombohany miparitaka ao Romania  amin'ny maha-firenena miaina tetezamita azy niala tamin'ny lasany Kaominista  ho any amin'ny fidirany ho isan'ny Firaisambe Eoropeàna tamin'ny 2007 .
Mpikambana ao anatin'ny tetikasa Mibilaogy nofinofy  miaraka amin'ny tale mpanatanteraky ny Orizonturi, Gabriela Tanasan ary ilay mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Peace Corps, Betsy Rowley .
Isaky ny Alakamisy tolakandro, ao anaty efitrano kely iray nomen'ny mpiadidy ny tanàna, mifamory  hiasa hanatontosa ny gazetiboky momba ny haisoratra famoakan-dry zareo isambolana , A Fi, na “To Be” ireo mpikambana ao amin'ny Orizonturi Foundation. Nandritra ny taona lasa no nanarahan-dry zareo ihany koa ny fampiofanana nataon'i Ovidiu Marginean  – psikôlôgy sady mpahay teknolojia avy ao an-toerana – mba hitantanana ireo bilaogy sy hampiasàna ireo tambajotra sôsialy hahafahana mizara ny tantarany ary hamolavolàna ny maha-izy an-dry zareo ety anaty serasera. Efa notaterin'i Juhie  tany aloha tany ny fivoaran'ilay tetikasa arakaraky ny nandrosoany avy amin'ny hevitra mikatsaka ny lafatra  ka lasa atrikasa fanofànana mpampiofana  tao Bucharest sy kliobana fihaonana bilaogera isakerinandro , ary hatramina tetikasa fanohanana sy fanamafisana ilay tetikasa mihitsy aza . Noraketin'i Beth Kanter ireo zava-boalazan'i Gabriela  tao amin'ny kaonferansa 2.0 iray tsy ikatsahana tombontsoa, nokarakarain'i Soros Romania .
Ireo mpandray anjara tena navitrika tamin'ny tetikasa “Mibilaogy nofinofy”, Ovidiu Loy , Geta , sy Olga Oana . Ovidiu Loy – izay niteny tamim-pahasahiana tany amin'ireo sekoly tao an-toerana momba ny tolona nataony hiatrehana ny fibobohana alikaola sy ny rarintsaina – dia namoaka lahatsoratra iray am-bilaogy tany am-piandohan'ity taona ity, nomeny lohateny hoe “Afaka!”.
Izaho dia lehilahy iray nokikisan'ny alikaola hatramin'ny fahatanoràko. Tena nankafy alikaola aho. Fantatro ankehitriny ny fiainana lavitry ny alikaola. Raisiko ho toy ny zavamahadomelina ny alikaola. Taona maro tany aloha, niezaka ny nijanona aho ary nanandrana namerina ny fiainako ho amin'ny toerana nisy azy fahiny.
Inona no nataoko? Nahita asa aho ary niezaka ny nampiroborobo ny tanànanay niaraka tamina ivontoerana iray: Academy Catavencu! Niezaka aho ny hamita fianarana mamily fiara. Nianatra nampiasa solosaina sy aterineto. Im-betsaka aho no efa nahavita namily samirery namonjy ny toerana fianarana mamily. Somary mikinangananga ihany izany hoe miala amin'ny alikaola izany! Betsaka ny olona nitsahatra tsy nandray anao intsony araka ilay maha-ianao anao fahiny. Vetivety ianao dia manova ny fomba fiainanao sy ny fitondrantenanao. Marobe no tsy hahafantatra anao.
Antenaiko hiova ho ahy ny zavatra rehetra ary ho vitako ny hanoratra zavatra tsara sy hampiseho ny mahatsara sy mahafinaritra ny fialàna amin'io zavamahadomelina io!
Constantin mitafa amin'i Olga Oana momba ny fandraisany anjara amin'ny klioba “Mibilaogy nofinofy”
Ny alakamisy teo aho nahavitra nanatrika ny fihaonana isankerinandron'ny “Mibilaogy nofinofy”. Nanao famelabelarana fohy momba ny Global Voices  sy sasantsasany amin'ireo tetikasa mahazo famatsiambola kely avy amin'ny  Rising Voices. Avy eo izahay nanapaka hevitra ny hiaraka hamokatra lahatsary iray. Nanome sosokevitra ireo mpandray anjara ary nifidy tamin'ireo lohahevitra marobe mety ho azo raisina, toy ny hoe “ahoana no fahitàn'ireo Romaniàna zokiolona sy ny tanora ny firenen-dry zareo” ary “ny tantaran'ny tsena ao an-toerana.” Farany izahay dia nanao fifanakalozana hevitra momba ny “Orizonturi Foundation” sy ny mety ho dikan'izany ho an'ny tsirairay amin-dry zareo. Namorona takelaka tantara  iray izahay ary nanao vangovango ankapobeny momba izay tian-dry zareo horesahana ao anatin'ilay lahatsary.
Cristiana Anca avy amin'ny ARET  no nanao tamin-pitiavana ny dika amin'ny teny anglisin'ny lahatsary.
Na dia ny “Mibilaogy nofinofy” ao Romania aza no voalohany nampiasa ny media vaovao ho fampiroboroboana sy fampahafantarana ny fahasalamana ara-tsain'ny vondrompiarahamonina, nanomboka teo dia efa niparitaka lavitra ilay tetikady. Marihan'ny  lahatsoratry ny New York Times Magazine fa misy “vondrompiarahamonina iray miroborobo ahitàna bilaogy miresaka ny rarintsaina,” isan'ireny ny vondrona bilaogy We Worry . Apetraky ny About.com ho anaty lisitra ireo tranonkala sy fitahirizana hafa miresaka bilaogy momba ny fahasalamàna ara-tsaina .
Araka ny nambaran'i Ovidiu Loy tamiko, afaka manome habaka ho an'ny olona tsirairay manana olana amin'ny fahasalaman'ny saina sy handraisana tsara an-dry zareo ireo bilaogy, tsy ahitàna ilay fanavankavahana atrehan-dry zareo isanandro ivelan'ny aterineto. Saingy, nampitandrina izy, ny aterineto dia mety koa ho lasa habaka iray fandosirana izay hanidy anao bebe kokoa tsy hifandray amin'ny fiarahamonina manodidina anao. Ambaran'i Loy fa nisy fotoana izy lasa diso niraikitra loatra tamin'ny aterineto ka nanadino ny tontolo ivelany. Ny dingana manaraka, raha ny fahitàna azy, dia ny mampiasa ny fandeferana sy ny fanekena hita ety anaty aterineto ho toy ny fitaovana iray sy tetikady entina hiatrehana ireo fitsaratsarampoana sy fanavankavahana izay mbola hita mameno ny tontolo ivelan'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/03/04/147197/
 fitsaboana rarintsaina (antidepressants): http://en.wikipedia.org/wiki/Antidepressant
 fikorontanana ateraky ny ahiahy sosialy,: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_anxiety_disorder
 araka ny tatitra vao haingana navoakan'ny gazetiboky New York Times.: http://www.nytimes.com/2009/10/04/magazine/04anxiety-t.html?_r=1
 Câmpulung Moldovenesc: http://en.wikipedia.org/wiki/Câmpulung_Moldovenesc
 Renirano Moldova: http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova_River
 andianà mpikatroka mandrisika fanahy : http://www.orizonturi.org/index-e1.htm
 fahasalamàna ara-tsaina: http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health
 fahasalamana ara-tsaina mifamatotra amin'ny fiarahamonina: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np25/en/index.html
 niala tamin'ny lasany Kaominista: http://en.wikipedia.org/wiki/Romania#Communism
 fidirany ho isan'ny Firaisambe Eoropeàna tamin'ny 2007: http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_Romania_to_the_European_Union
 Mibilaogy nofinofy: https://rising.globalvoicesonline.org/projects/blogging-the-dream/
 Betsy Rowley: http://lostintransylvania.blogspot.com/
 gazetiboky momba ny haisoratra famoakan-dry zareo isambolana: http://www.orizonturi.org/e_publ.htm
 Orizonturi Foundation. : http://www.orizonturi.org/
 Ovidiu Marginean: http://momentepenibile.blogspot.com/
 hevitra mikatsaka ny lafatra: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/08/23/blogging-the-dream-battling-mental-health-stigmas/
 atrikasa fanofànana mpampiofana: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2009/01/01/blogging-the-dream-dreaming-to-blog/
 kliobana fihaonana bilaogera isakerinandro: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2009/03/10/blogging-the-dream-theory-into-practice/
 tetikasa fanohanana sy fanamafisana ilay tetikasa mihitsy aza: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2009/05/18/blogging-the-dream-strategies-and-challenges/
 ireo zava-boalazan'i Gabriela: http://beth.typepad.com/beths_blog/2008/11/live-blogging-o.html
 Soros Romania: http://www.osf.ro/ro/program_articol.php?articol=127
 Ovidiu Loy: http://budda-barradio.blogspot.com/
 Olga Oana: http://sensibilitatesidorinta.blogspot.com/
 tetikasa mahazo famatsiambola kely avy amin'ny: https://rising.globalvoicesonline.org/projects/
 takelaka tantara: http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/storyboarding/
 Cristiana Anca avy amin'ny ARET: http://www.aret.ro/
 We Worry: http://weworry.wordpress.com/
 bilaogy momba ny fahasalamàna ara-tsaina: http://mentalhealth.about.com/od/blogs/Mental_Health_Blogs.htm